Ei Ei Myat•9months ago
ယုန်လေးကတော့ နောက်ထပ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး တစ်ကား ရိုက်ကူူးဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ မင်းသားဇာတ်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Photo : ယုန်လေး
ယုန်လေးကတော့ မြင့်မြတ်နဲ့ နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်ကား ရိုက်ကူးဖို့အတွက် မင်းသမီးတစ်ဦးရှာနေပါတယ်။ မြင့်မြတ်ရဲ့ ချစ်သူအဖြစ် ပါဝင်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် မင်းသမီးရဲ့ သရုပ်ဆောင်ရမယ့် အခန်းကတော့ (၄)ခန်းလောက်ပဲ ပါမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ယုန်လေးက ဆိုပါတယ်။
“မြင့်မြတ် ချစ်သူအဖြစ်ဘေးနားတွင် ဂေါ်မယ့် ကောင်မလေးတစ်ဦး Sexy ဖြစ်ပြီး . ဘာမှ ဖော်ချွတ်စရာမလိုပါ ။၄ခန်းလောက်ပဲပါပါမည်။ အသစ်ထဲက ထားချင်လို့ပါ ။ကွက်တိကတော့ အေးမြတ်သူပေါ့ ။ဘယ်သူများ ရှိနိုင်မလဲ . . . အကြံများပေးစေချင်လိုပါသည်” ဆိုပြီး ဇွန်လ(၂၈) ရက်နေ့က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက် ရိုက်ကူးမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ မင်းသမီး လုံးဝမပါပဲ မြင့်မြတ်နဲ့ သူနဲ့ အဓိကပါဝင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းနာမည်ကို Mafia city လို့ ပေးထားပြီး ယုန်လေးက ဇာတ်လမ်း သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ အဖြစ် ပါဝင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“အခု Powerking မှ နောက်ထပ် ထုပ်လုပ်မည့် Mafia City အမည်ဖြစ် ကျွန်တော် ဇာတ်လမ်း သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ အဖြစ်ရိုက်ကူးမည့်ကားတွင်
မြင့်မြတ် ယုန်လေး တို့ပါဝင်ပြီးမင်းသမီးလုံးဝမပါပါ” ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။
ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံမှုကြောင့် သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခွင့်ရနေတာကြောင့် သူ့အနေနဲ့ အရမ်းကို ပျော်ရွှင်မိပြီး နောက်ထပ်လုပ်မယ့် အလုပ်တွေကိုလည်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျွန်တော်ဂီတ ဘက်က လာတဲ့ ငချွတ်တစ်ယောက်ပါဘာကောင်မှ မဟုတ်ပါ ။ ပရိတ်သတ် ဝန်းရံမူ့ကြောင့် ပျော်စရာသတင်းများစွာ ရုပ်ရှင်ကား ကြေညာများစွာ သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ အဖြစ် အလုပ်များ ဆက်လက် တောက်လျောက်လုပ်ဆောင်ခွင့်တွေ ရပြီ ဖြစ်ပါသဖြစ် အရမ်းပျော်ပါသည် ။ အကောင်းဆုံး လည်း ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမည်။အလွယ်မလုပ်ဖူးလို့လည်း ဂတိပေးပါသည် “ လို့ ယုန်လေးက ဆိုပါတယ်။
ယုန်လေးက လက်ရှိမှာ လူငယ်အကြိုက် အမိုက်စား အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း သူကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ‘’သတိ အန္တရာယ်ရှိသည်’’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးက ရုံတင်ပြသနေတာပါ။ သူဟာ Original Gangster 1 ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို စတင်ရိုက်ကူးခဲ့တာက စပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့ ထပ်တူကျခဲ့လို့ အောင်မြင်မှုနေရာ တစ်နေရာကို ရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။